Shariif Sh Axmed & Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ku dhawaaqay in Farmaajo gacmaha la qabanayo.
KISMAAYO(P-TIMES) – Hoggaamiyaasha Xisbiyada mucaaradka dawladda Faderaalka ee kala ah HIMILO QARAN & WADAJIR oo saxaafadda kula hadlay magaalada Kismaayo, markii ay ka dageen waxay sheegeen in ay ilaaliyaan dawladnimada dalka oo aysan marnaba yeeleyn in la dumiyo Federaalka.
Hoggaamiyaasha mucaaradka ayaa sheegay in ay ixtiraam badan u hayeen Madaxweynaha Soomaaliya, balse ay mar kasta dawladdii Soomaaliyeed sameynayso ficilo kasoo horjeeda dawladnimada dalka oo hoos u celinaya.
Shariif Sheekh Axmed wuxuu sheegay in isagu daldka soo gaarsiiyey meel doorasho lagu qaban karro Muqdisho, taas oo uu sheegay in ay muhiim ahayd uu xilkana ku wareejiyey markii laga guuleystay.
Sidaas oo kale fiicladii u dambeeyey ee lagu sameeyey ayuu sheegay in aysan sharciga meelna uga qorneyn, ayna ahayd xadgudub cad oo isaga iyo shacabka Jubbalandba loo geystay, balse aysan ka hari doonin.
Cabdiraxman Cabdishakuur oo horey ay weerar ugu qaaday dawladda Soomaaliya ayaa sheegay in aysan marnaba aqbali doonin ficilada Xukuumadda, isagoo sheegay in isku day kasta oo lagu diidan yahay dawladnimada ay ka hortagayaan.
Mr, Warsame ayaa sheegay in ay Kismaayo u yimaadeen sidii ay wada tashi u yeelan lahaayeen oo ay gacmaha u qaban lahaayeen dawladda Faderaalka Soomaaliya, maadaama ay doomayso in ay dumiso dawladnimada dalka.
Hoggaamiyaasha siyaasadda Soomaaliya oo dhamaantood ku kacsan dawladda Faderaalka ayaa tagay Kismaayo maanta, waxaana halkaas uga bilaaban doono kulamo siyaasadeed xasaasi ah.
Niman badan oo ka soo jeeda beelaha USC waxay ku waasheen kursiga ABU LAALUUSH EE VILLA XAMAR.Wax kalena nimankaasu kursigaas u raadin mahayaan ee waa dhaqaalo doon oo kama aha wadaninimo doon.
Shariif iyo Abdishakuur waxay isku mar soo noqdeen madaxweyne iyo masuul kaloo safe ee maxay soo qabteen?Waa waxba ee hadda waxay la orinayaan waa lacag doon.